စက်သုံးဆီများတွင် အရောအနှော များနေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စက်သုံးဆီများတွင် အရောအနှော များနေ
စက်သုံးဆီများတွင် အရောအနှော များနေ
Posted by တွတ်ပီ on Dec 3, 2011 in Copy/Paste |9comments
ခုတစ်လော ဆိုင်ကယ်တွေ ခဏ ခဏ တွန်းလာတာတွေ့လို့ မေးကြည့်မိတော့ ကာပရိုက်တာ မကောင်းတာလို့ပြောပါတယ်။ ခဏခဏ ဆေးပေးရတယ် လို့လဲပြောပါသေးတယ်။ ဒါနဲ့ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်ကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ ဆီမသန့်တာလို့ပြောပါတယ်။ ဆီက ဘယ်လိုမသန့်မှန်းတော့မမေးမိလိုက်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဆီဆိုင် ကိုဝင်ပြီး ဆီထည့်ရင်းနဲ့ မေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ သူများတွေကတော့ အောက်တိန်း ကိုထည့်လို့ပြောတာနဲ့ အောက်တိန်း ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ ဆီဆိုင်က ဆီသန့်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သေသေချာချာမေးကြည့်မိပါတယ်။“ဆီသန့်တယ်ဆိုတော့ မသန့်တာရောရှိလားခင်ဗျာ?” “ဟာ ရှိတာပေါ့ဟု ဆိုကာ ထုတ်ပြသည်၊ ဒီမှာလာကြည့် ဒါက ဓါတ်ဆီ အစစ်၊ ဒါက အတု ၊ ဟုတ်ပါသည်၊ အစစ်က လက်ပေါ်ကိုတင်ကြည့်တော့ လက်ကအေးသွားပါသည်၊ နောက်ပြီးတော့ ခဏလေးနဲ့ လက်က ခြောက်သွားပါသည်။ အတု ကြတော့5မိနစ်နေလဲ လက်ကမခြောက်ပါဘူး။ အဲဒါ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့မေးကြည့်တော့“ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့အခေါ် Joker ဆီလို့ခေါ်တဲ့ ဆီ တစ်မျိုးနဲ့ရောထားတာပါ၊ ရောထားတဲ့ဆီက အဲလိုပဲဖြစ်သွားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဈေးသက်သာပါတယ် ”ဟုပြောပြပါသည်။ အဲဒီ ဂျိုကာ ဆီဆိုတာက သူ့ကို ဓါတ်ဆီနဲ့ ရောရင် ဓါတ်ဆီ ဖြစ်ပြီးတော့ ၊ ဒီဇယ် နဲ့ရောရင် ဒီဇယ်ဖြစ်သွားရောတဲ့ ၊ ရောတဲ့ အချိုးအစားအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဈေးနှုန်းနဲ့ အရည်အသွေး ကွာခြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တိန်းဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ရောကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ အောက်တိန်းက အနံ့ရှိတော့ ရောမှန်းမသိနိုင်တော့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇယ်ဆိုရင်လည်း ချက်ဆီ (သို့)ချွတ်ဆီ နဲ့ရောတတ်ကြပါတယ် ။ လေဆီ ဆိုတာလဲ ရှိသေးတယ်တဲ့ ၊ ရှုပ်နေတာပါပဲ၊ ကျွန်တော်ကတော့ ဈေးနှုန်းကို သိပ်ပြီးဂရုမစိုက်ချင်ပါဘူး။ သူ့ဈေးနဲ့သူပေါ့လေ ဆီသန့်ရင်ပြီးတာပါပဲ၊ ဆီမသန့်ရင် စိတ်ညစ်ရတယ်၊ အလုပ်ရှုပ်တယ်။ အချိန်ကုန်တယ်လေ။
မရှောင်ရင် လွတ်တယ်နော် ...
View all posts by တွတ်ပီ →
မြန်အောင်သားလေးရဲ့ ဆိုင်ကယ်က efi ဆိုရင်တော့ အောက်တိန်းကိုထည့်ပေါ့၊ တရုတ်ဆိုင်ကယ်ဆိုရင်တော့ ဓါတ်ဆီ ကိုပဲထည့်ပါ။ အောက်တိန်းက အငွေ့ပျံအား ပိုများတော့ ဆီပိုကုန်တယ်လေ။ ဒါပေမယ့်ဈေးနှုန်း သက်သာတော့ ဆီများများ တော့ ရပါတယ်။ ရောတာကတော့ မပြောချင်တော့ပါဘူး။ မြန်အောင်က ဆိုရင် ပိုသိမှာပါ။
ဒါကတော့ စက်သုံးဆီဆိုင် တွေ ဆင်ခြင်သင့်တဲ့ ကိစ္စပေါ့နော် …
မြန်အောင်သားက ဈေးနှုန်းကို ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ဂရုစိုက်ရမယ်ခင်ဗျ ..
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဆီတစ်ခါထည့် ငါးရာ ငါးရာ နဲ့ ကိုယ်သောက်မယ့် လဖက်ရည်ဖိုးက ဆိုင်ကယ်ပဲ သောက်သောက်သွားတာ များနေပြီ ..။
နောက် ငါးရာဖိုးဆိုရင် အရင်တုန်းက တစ်ပုလင်း ၊ နောက် ပုလင်းဝက် ၊ နောက်ကျတော့ ပုလင်းဝက်ထက်တောင် နဲနဲလာပြီ …။
efi က ကာဗရိုက်တာမပါဘူးလေ။ ဆီမသန့်ရင်ဂန့်ရော။ အောက်တိန်းကို ဆီဆိုင်မှာ ၀င်ထည့်ပေါ့။ လမ်းဘေးက ဆိုင်မှာ ထည့်ရင်တော့ အရောခံရမှာဘဲ။
အောက်တိန်းက အင်ဂျင်အားကောင်းတယ်။တောင်ပေါ်တက်ရင် တော်ရုံမီးမခေါက်ဘူးဗျ။ ဆီတော့စားတာပေါ့ဗျာ။
တနေ့က အင်ယားကန်ဘောင်နားက ဆီဆိုင်မှာ ၇ုံးကား လမ်းကြုံလို့ဆီသွားထည့်တာ.. အောက်တိန်မှာ ဂျိုကာေ၇ာထားတာ မဟုတ်ပဲ..ေ၇တွေတော့ေ၇တွေ…. သူတို့ပြောတာတော့ အင်းလျားကန် နဲ ကပ်နေလို့ေ၇စိမ့်တာတဲ့…ေ၇ပဲစိမ့်တာလား ..ေ၇ပဲလောင်ထဲထားတာလားတော့.. သူတို့ပဲသိလိမ့်မယ်… နောက်ဆို အဲဒီဆိုင် ကို ဝေါင်ဝေါင်၇ှဲ ပဲ….
မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ပါကွယ်
EFI တွေတော်တော်များများစီးဖူးပါတယ်။ခုစီးနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်လဲ150R EFI ပါဘဲ။ဆီကတော့ ပုံမှန်ဘဲOctane နဲ့ ဓါတ်ဆီရောစီးဖြစ်ပါတယ်။
ဆီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ EFI နဲ့ Carburitritor မှာ EFI ကိုပိုစိတ်ချရပါတယ်။ဆေးစရာလဲ မလိုသလို၊ပျက်လဲမပျက်ပါဘူး။
ကားမှာတော့ ဆီမသန့် ရင်တော့ဂန့် တယ်ဆရာ။ ကြောင်သွားရင် သွားရော။ ဆိုင်ကယ်လည်းတူတူပဲထင်တယ်။ မယုံရင် အနည်ပါတဲ့ ဆီတို့ရေရောတဲ့ဆီတို့ နဲ့ စမ်းကြည့်
မလုပ်ပါနဲ့ ဂြိုလ်သား ရယ်.. ရှိတာမှ ဒါလေး တစ်စီးကို တော်ကြာမှ လမ်းလျှောက်နေရပါဦးမယ်..